Wohler သည် AMP1-8-M အသံမော်နီတာများဖြင့်ယခုအချိန်၌ HD သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Wohler TIMES NOW က AMP1-8-M ပေး Audio မော်နီတာနှင့်အတူ HD ကိုမှ Upgrade ကူညီပေး
Wohler TIMES NOW က AMP1-8-M ပေး Audio မော်နီတာနှင့်အတူ HD ကိုမှ Upgrade ကူညီပေး
မွမ်ဘိုင်း, အောကျတိုဘာ 31, 2017 - Wohler Technologies က, ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်အချက်အလက်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူက၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြေညာ HD အဘို့အကူးအပြောင်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့် NOW က TIMESအိန္ဒိယတွင်တစ်ဦးဦးဆောင် 24 နာရီအင်္ဂလိပ်ဘာသာသတင်းရုပ်သံလိုင်း။
"ကျနော်တို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသောသွင်းအားစုနှင့်အတူတက်ထားရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအသံစောင့်ကြည့်ရေးယူနစ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်" Kalyan Chakravarthi, အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှူး, Times သတင်းစာကွန်ယက်ကပြောပါတယ်။ "ဒီ AMP1-8-M ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်ကိုဖန်ဆင်းသောအရည်အသွေးကောင်းပီနှင့်အတူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်ဂျက်အတွင်း, အသံ၏ရှစ်လိုင်းများ၏အုပ်စုနှစ်စုစောင့်ကြည့်မယ့် 3G-SDI ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Times သတင်းစာက Network အတိတ်ကာလ Wohler မော်နီတာ [Wohler ရဲ့ AMP2-16V ယူနစ်] ကိုအသုံးပြုထားပြီးကျနော်တို့က၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ဆက်လက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် Wohler ကိုသိနှင့်ကုမ္ပဏီခြွင်းချက်အသံအရည်အသွေးနှင့်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော, ခိုင်မာတဲ့စနစ်ကကမ်းလှမ်းကြောင်းကိုငါသိ၏။ "
In-စတူဒီယိုသို့မဟုတ်ဝေးလံသောဘဏ်ဍာများအတွက်စံပြ, အ AMP1-8-M ရှစ် SDI အော်ဒီယိုချန်နယ်မှတက်၏ချက်ချင်းရွေးချယ်ရေးနှင့်ကဉျြးခြုပျပေးသညျ။ အဆိုပါ AMP1-8-M အနေနဲ့အလွန်အမင်းအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းမှာအများဆုံးတောင်းဆိုမှုများထုတ်လုပ်မှုပလီကေးရှင်း SDI အသံစောင့်ကြည့်ဘို့အစာရှောင်ခြင်း, ထိုးထွင်းသိမြင်စစ်ဆင်ရေးပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာ created သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကာအလိုလိုသိရှေ့ panel ကို interface မှတစ်ဆင့်ပြန်ပြောပြနိုင် configurations အတူချိန်ကိုက်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်မှန်သောချိန်ခွင်ထိန်းချုပ်မှု, တောက်ပ 2.4 လက်မအရွယ် LED-backlit LCD ကိုပြသမှုအပေါ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အဆင့်လက္ခဏာများ၏ရှင်းလင်းသော Display ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ အသုံးပြုသူများ built-in စပီကာ, နားကြပ်သို့မဟုတ် Analog စလက်ငင်းမှတဆင့်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
NOW က TIMES အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဦးဆောင် 24 နာရီအင်္ဂလိပ်ဘာသာသတင်းရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ NOW က TIMES Analog စနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် cable ကို, DTH နှင့်မိုဘိုင်းပေါ်အပါအဝင်အိန္ဒိယအားလုံးကိုပလက်ဖောင်း, ဖြတ်ပြီးရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Channel ကိုအိန္ဒိယအပေါ်ပြင်ပတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် www.timesnownews.com.
Wohler နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အစုစုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.wohler.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Wohler Technologies က 2017-10-31
ယခင်: Pliant Technologies ကနယူးသြစတြေးလျဖြန့်ဖြူးအဖြစ်အမျိုးသားအသံစနစ်များနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံး Expand မှ Continues